Sat, May 25, 2013 | 01:11:06 NST
गोविन्द मैनालीलाई झण्डै ७ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति
होम स्टेबाट समृद्धि
शर्त तोडेर सगरमाथा क्षेत्रमा चलचित्र छायांकन
मताधिकारबाट वञ्चित गरिए आन्दोलनः प्रवासी नेपाली
कृष्णसेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार न्यौपानेलाई
नागरिकता लिने प्रक्रिया झन्झटिलोः लैंगिक अल्पसंख्यक
नलवपरासीमा माओवादीको समानान्तर जिल्ला समिति
अनशन फिर्ता लिन महतोलाई उच्चस्तरीय समितिको आग्रह
ट्राफिक प्रहरी सडकमै नाचेपछि..... (भिडियो)
पूर्व सभासद् हकको हत्या भएको चारदिनपछि अन्त्येष्टी
धामीको भर पर्दा बालकको ज्यान गयो
महिला क्रिकेटः भैरहवा समूह विजेता हुँदै सेमिफाइनलमा
अनशन बसेका महतोलाई अस्पताल लगियो
यो हप्ता सुन तोलामा २३ सय रुपैयाँ बढ्यो
झोले भए दयाहाङ राई
ट्याङ्कर खस्दा १ को ज्यान गयो
काठमाडौं, जेठ १० – अनाहमा जापानी जेलमा १५ वर्ष भन्दा धेरै बन्दी जीवन बिताएका इलामका गोविन्द मैनालीले झण्डै ७ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउनु हुने भएको छ ।
विनोद ढकाल/ उज्यालो
काठमाडौं – सदरमुकाम बेसीशहरबाट गाडी चढेर २ घण्टामा पुगिन्छ लमजुङको घलेगाउँ । सार्क राष्ट्रकै नमुना पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँमा वर्षमा १९ हजार नेपाली र ११ सय विदेशी पर्यटक पुग्छन् । यसले घलेगाउँका वडा नम्वर १, २ र ३ का ८० घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
अत्याधुनिक उपकरण नियन्त्रणमा
पीटी लोप्चन/ उज्यालो । काठमाडौं, जेठ १० – सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जको कार्यालय नाम्चेले चलचित्र छायांकनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १० – प्रवासी नेपालीले सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई संविधानसभा चुनावमा मताधिकारबाट वञ्चित गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भारत प्रवासमा रहेका तीन वटा संस्थाका नेताले मताधिकारबाट वञ्चित गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
रुपन्देही, जेठ १० – क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देहीले स्थापना गरेको ‘कृष्णसेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ यस वर्ष पत्रकार लेखनाथ न्यौपानेलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
भक्तपुर, जेठ १० – समलिंगी तेश्रोलिंगीले पहिचान सहितको नागरिकता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रबारदेखि भक्तपुरमा जारी दुई दिने तालिममा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले पहिचान सहितको नागरिकता लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएको गुनासो गरेका हुन् ।
‘विप्लव’ धारले असहयोग गरेको आरोप
विद्रोही गिरी/ उज्यालो । नवलपरासी, जेठ १० – एकीकृत नेकपा माओवादीबाट फूटेर गठन भएको नेकपा माओवादीको नवलपरासीमा समानान्तर जिल्ला समिति गठन भएको छ । अवध राज्य समितिका सदस्यहरुले मित्रचरण शर्माको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय समानान्तर जिल्ला समिति गठन गरेका हुन् ।
काठमाडौं, जेठ १० – उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १० – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गका प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथुलाई यतिबेला फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ छ ।
सँधै ट्राफिक व्यवस्थापनको गुनासो मिलाउन व्यस्त हुने हाछेथु आफैले नाचेको भिडियोका कारण व्यस्त बन्नुभएको हो ।
सप्तरी, जेठ १० – पूर्व सभासद् सदरुल मियाँ हकको अन्त्येष्टि भएको छ ।
गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले घटनास्थल पुगेर पीडित परिवार र स्थानीयको माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि शव उठाएर इस्लामिक परम्परा अनुसार हकको अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
पाँचजना धामी पक्राउ
महोत्तरी, जेठ १० – धामी झाँक्रीको विश्वास गर्दा शुक्रबार विहान महोत्तरी रामनगर ९ का एक विरामी बालकको ज्यान गएको छ ।
टाउको दुख्ने, वान्ता गर्ने विरामी भएका बेला अस्पताल नलगी झारफुक गर्दा स्थानीय १२ वर्षिय मदन मस्राङ्गीको ज्यान गएको हो ।
काठमाडौ, जेठ १० – क्षेत्र नम्बर ४ भैरहवा समूह बीको बिजेता बन्दै १९ वर्ष मूनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ ।
काठमाडौ, जेठ १० – काठमाडौको रत्नपार्कमा आमरण अनसनमा बसेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि प्रहरीले उहाँलाई अस्पताल पुर्‍याएको हो ।
काठमाडौ, जेठ १० – यो हप्ता सुनको भाउ २३ सय ३ रुपैयाँले बढेको छ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार तोलाको ४९ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ शुक्रबार अन्तिम दिन ५१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
काठमाडौ – कुराकानीका क्रममा कसैले ‘झोले’ भन्यो भने धेरैको रिसको पारो चढ्छ । तर कलाकार दयाहाङ्ग राईलाई कसैले झोले भनिदिंदा निकै खुशी हुन्छन् । उनलाई लागेको छ अब ‘गोफ्ले’ भन्ने भन्दा ‘झोले’ भन्नेहरु धेरै हुन्छन् ।
चितवन, जेठ १० – चितवनको दारेचोकमा पर्ने घोप्टेभीरबाट त्रिशुली नदीमा ट्याङ्कर खस्दा एक जनाको ज्यान गएको छ । प्रहरी निरीक्षक जीवलाल चुँदालीले एक जनाको ज्यान गएको बताउनुभयो । ट्याङ्करमा अरु दुईजना पनि रहेको आशंका गरिएको छ ।
माई जलविद्युतको ६ करोडको शेयर बिक्री
काठमाडौ, जेठ १० – माई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिदका लागि इलामका वासिन्दाको ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेडले शेयर बिक्री खुल्ला गरेपछि स्थानीयबासिन्दाको उल्लेख्य रुपमा आवेदन परेको हो ।
काठमाडौका पशु बधशाला धेरै फोहोर
काठमाडौ, जेठ १० – काठमाडौ उपत्यकाका धेरैजसो पशु बधशाला धेरै फोहोर भेटिएका छन् । शुक्रबार बिहान काठमाडौ टेकुको एउटा र ललितपुर लगनखेलको ३ वटा बधशालाको अनुगमन गर्दा धेरै फोहोर र अबैधानिक तरिकाले सञ्चालन भएको भेटिएको हो ।
नदी बढेपछि यातायात अवरुद्ध
बर्दिया, जेठ १० – बर्दियाको कोठियाघाट गेरुवा नदीमा पानीको सतह बढेपछि यातायातका साधन रोकिएका छन् । ३ दिन यता कोठियाघाट नजिक कर्णाली गेरुवा नदीमा जडान गरिएको पन्टुन पुलको किनारमा पानीको सतह बढेपछि गाडी चलेका छैनन् ।
ओबामाद्वारा ड्रोन आक्रमणको बचाउ
जेठ १० – अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले देश र नागरिकको रक्षाका लागि प्रयोग गरेको भन्दै ड्रोन आक्रमणको बचाउ गर्नुभएको छ । ओबामाले त्यस्तो आक्रमणमा आम नागरिक नमारिउन् भन्ने सुनिश्चितता भने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चन्दा उठाएरै १३ किलोमिटर सडक निर्माण
दमन राई/उज्यालो, खोटाङ, जेठ १० – गाउँले मिलेपछि विकासका लागि अरुको मुख ताक्नुपर्दैन भन्ने प्रमाणित गरिदिए खोटाङ दुर्छिमका वासिन्दाले । उनीहरुले चन्दा उठाएरै जम्मा पारेको रकमले १३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरे ।
शिक्षा तथा पुस्तक प्रदर्शनी सुरु हुँदै
काठमाडौ, जेठ १० – काठमाडौमा शुक्रबार १७ औं नेपाल शिक्षा तथा पुस्तक प्रदर्शनी सुरु हुँदैछ । प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरुका विभिन्न विधाका पुस्तक सहितका एक सय १५ वटा स्टल रहने आयोजकले जनाएका छन् ।
चोरी डकैती बढेपछि काठमाडौमा सुरक्षा सतर्कता
काठमाडौ, जेठ १० – चोरी डकैतीका घटना धेरै हुन थालेपछि काठमाडौ उपत्यकामा प्रहरीले सुरक्षा सर्तकता बढाएको छ । बढी चोरी हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकका प्रहरी खटाइने गरेको प्रहरी प्रवक्ता केशव अधिकारीले बताउनुभयो ।
ट्याक्टर पल्टिदा १ को ज्यान गयो
बुटवल, जेठ १० – रुपन्देहीमा बिहीबार राति ट्याक्टर पल्टिदा एक जनाको ज्यान गएको छ । रुद्रपुर ८ हरैयामा रहेको भित्री सडकमा लु २ त ७२२४ नम्बरको हाते ट्याक्टर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा स्थानीय १७ वर्षिय प्रेमबहादुर थापाको ज्यान गएको हो ।
गृहमन्त्रीसंग वार्तापछि सप्तरीमा राजमार्ग खुल्यो
राजविराज, जेठ १०– सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएपछि चारदिनदेखि अवरुद्ध पूर्वपश्चिम राजमार्गको सप्तरी कल्याणपुरमा गाडी चल्न थालेका छन् । गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सप्तरी पुगेर पीडित पक्षले राखेका पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि राजमार्गमा गाडी चल्न थालेका हुन् ।
मौसम अझै केही दिन यस्तै
काठमाडौ, जेठ १० – देशका धेरैजसो ठाउँमा बदली भएको मौसममा सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । अझै दुई/तीन दिन मौसममा सुधार हुने संकेत नदेखिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
गोर्खाकपः पुलिस र मुनाल क्लब भिड्दै
काठमाडौ, जेठ १० – गोर्खाकप फुटवल प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार नेपाल पुलिस क्लब र झापाको मुनाल क्लबवीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । बिहीबार हुने भनिएको यी दुईवीचको खेल मुनाल क्लब समयमा काठमाडौ नआइपुगेकाले शुक्रबारका लागि सारिएको थियो ।
मध्य तथा सुदुर पश्चिम पर्यटन महोत्सव आजदेखि
काठमाडौ, जेठ १० – काठमाडौमा शुक्रबार मध्य तथा सुदुरपश्चिम पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव सुरु हुँदैछ । महोत्सवमा स्थानीय खानाका परिकार, भेषभुषा लगायतका २० स्टल राखिने छन् ।
पूर्व सभासद हत्याको बिरोधमा तीन दिनदेखि यातायात ठप्प
एम्बुलेन्स तोडफोड, पत्रकारमाथि हातपात
वैद्यनाथ यादव/ उज्यालो । सप्तरी, जेठ ९ – पूर्वसभासद सदरुल मिया हकको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै भएको प्रदर्शनका कारण तेश्रो दिनपनि पूर्वपश्चिम राजमार्गको सप्तरी कल्याणपुर सडक खण्डमा यातायात ठप्प छ ।
भारी वर्षाले काठमाडौंमा जनजीवन अस्तव्यस्त
काठमाडौं, जेठ ९ - विहीवार दिउँसो अकस्मात परेको पानीले काठमाडौंका अधिकांश सडकमा पानी जमेपछि सवारी साधन र पैदाल यात्रुलाई हिंड्न निक्कै समस्या भयो ।
छोरालाई जंगलमा छाढ्ने आमाबिरुद्ध ज्यान मार्ने मुद्दा
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो । पर्वत, जेठ ९ - प्रेमीलाई खुसी पार्न काखमा हुर्काउँदै गरेको ११ महिने छोरालाई जंगलमा छाड्ने निष्ठुरी आमाकाबिरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
नयाँ कप्तान र प्रशिक्षकको साथमा नेपाली क्रिकेट टोली भारत जाने
काठमाडौं, जेठ ९ - एकतीसौं अलइण्डिया उत्तरखण्ड गोल्डकपका लागि नेपाली क्रिकेट टोली यूवा कप्तान र यूवा प्रशिक्षकको साथमा भारत जाने भएको छ ।
भोजपुर मालपोतमा सुधारको संकेत
श्यामकृष्ण दाहाल/उज्यालो । भोजपुर, जेठ ९ - जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भोजपुरमा रकम लेनदेनको विषयको समाचार उज्यालो अनलाइन मार्फत सार्वजनिक भएपछि मालपोतमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
लेक लागेर पर्यटक भरियाको मृत्यु
सोलुखुम्बु, जेठ ९ - सगरमाथा आरोहीको सामान झार्ने क्रममा लेक लागेको विहीवार एक जना पर्यटक भरियाको ज्यान गएको छ ।
मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारवाही नहुनु दुखदः एमनेष्टी
काठमाडौं, जेठ ९ – नेपाल सरकारले मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कारवाही नगरेको र पीडितलाई न्याय नदिएकोमा एमनेष्टी इन्टरनेशनलले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
महतोको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीरः चिकित्सक
काठमाडौं, जेठ ९ – तीन दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ । वीर अस्पतालका डा. ध्रुवप्रसाद सिंहका अनुसार महतोको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको छ ।
Japanese national Miura, 80, is oldest to conquer Everest
KATHMANDU, MAY 23 - Yuichiro Miura of Japan has setanew record by climbing the world’s highest peak at the age of 80.
Miura reached atop the Mount Everest at 8:45 am on Thursday and become the oldest person to step on top of the world’...